Gabaasa Haala Sochii Dargaggoota Oromoo fi Kubbaa Miillaa 2013 | QEERROO
Posted on January 28, 2013 by Qeerroo
4 thoughts on “Gabaasa Haala Sochii Dargaggoota Oromoo fi Kubbaa Miillaa 2013”
Wegene on January 28, 2013 at 2:00 am said:
Baay’ee sinitti boonne!
Belachew Ibsa on January 28, 2013 at 11:12 am said:
Akkam jirtu Qeerro?
Ituu fakkii J/Taaddasaa Birruu fi Nilsan Mandeella walbukkeetti godhani agarsiisanis baayyee gaarii ture.Gara fuulduraattis haa ta’u.
KOOKEET on January 29, 2013 at 4:14 am said:
GALATI KOO GUDDAA JAJJABAADHAA, GARAA DIINAA GUBAA
yeroo geese on January 29, 2013 at 11:53 am said:
Kun sochii oromoof jalqaba dha waraaqisaaaf.
Haalli sochii qeerroon itti jirtan QBO bakkaan gayuuf
1. Guyyaa murta´a guyyaa fincila Declaration Day for Revolution
2.Cufaati tajalila gara garaa
3 Barruu facaasu keessayu waraana wayaaneef
4.mormii uummata kan akka finfinee keesati kaasu
5.Mormii haga dhumati gochuu xumura bakka akka gayuu yaalu